i-ODI series ithuba lokufunda – u-Du Plessis
Standard Bank Proteas captain, Faf du Plessis
Ukapteni wama-Standard Bank Proteas, u-Faf du Plessis, uthi imidlalo emihlanu ye-One-Day International (ODI) series bedlala ne-Sri Lanka e-Dambulla ngeSonto izoba ‘ithuba lokufunda’ kwiqembu lakhe elingenaso isipiliyoni ngaphambi kwe-2019 ICC Cricket World Cup ngaphansi konyaka. Iqembu linabadlali ababili abazodlala umdlalo wokuqala u-Reeza Hendricks no-Junior Dala, kanye kanye nabanye abadlali abaningi abahlose ukuzikhombisa kwi-season ebalulekile ye-World Cup.
u-JP Duminy omunye kuphela umdlali eqenjini osewake wadlala e-Rangiri Dambulla International Stadium – ama-Proteas ahlulwa kuyona yombili imidlalo eyadlalwa ngo-2004 – u-Hashim Amla, u-Faf du Plessis, u-David Miller no-Quinton de Kock banaso isipiliyoni sokudlala kwi-island.
Iqembu lama-Proteas le-World Cup alikaphethwa, okusho ukuthi ukulingana phakathi kokunika amathuba kanye nokunqoba imidlalo neqembu lasekhaya eliku-No.8.
“Sizozama futhi sinike wonke umuntu ithuba lokudlala,” kusho u-Du
Plessis ngaphambi kwe-ODI yokuqala. “Kuphinde kufike kulokhu esinakhoeqenjini lethu kanye nokuzama ukuthola ukulingana okufanele. Bekukuhle kimina ukubona abadlali bephakamisa izandla kumdlalo wokulungiselela.”
“Kimina ithuba lokufunda yilona elijabulisayo,” esho. “Ngokwami angibheki ukunqoba ama-series alandelayo njengokubaluleka. Ukuzama ukuthola ukuthi sizobanika kanjani abafana amathuba, ukuthi bazofunda kanjani, bangasithola kanjani isipiliyoni kanye nokuthi bazofundani kwizimo ezihlukile. Lokhu kuzosisiza kanye nokusiqinisa lapho esifuna ukubakhona onyakeni ozayo.”
Nokho isimo silindeleke ukuthi silingane kwi-series, iqembu lasekhaya lilindeleke ukuncika kuma-spinners abo emuva kokubacindezela kwi-Test series. u-Du Plessis uthi ‘uyakujabulela’ ukubona ukuthi iqembu lakhe lizokhula kanjani kusukela kokuhlukile kanye nesipiliyoni senselelo yokudlala e-Sri Lanka, futhi okubalulekile, ukufunda ukudlala ne-spin.
“Iqembu le-Sri Lanka linama-spinners alungile, angeke ahambe,” esho. “Ngicabanga ukuthi kuyajabulisa, ikakhulukazi ukuba neqembu elincane lapha. Kunabadlali abadlala kulesimo okokuqala, lokho kuyangijabulisa. Kumayelana nokuthi bazizwele isimo kanye nokuthola indlela yokubhekana nama-spinners. Uma ukwenza amaphutha noma ukwenza kahle, lokho kulungile, kumayelana nokufunda.”
“i-tour efana nalena, esikuzamayo ukuba nesiqiniseko sokuthi singabangcono njengeqembu kunyaka ozayo, ngizibona kanjalo izinyanga ezintathu noma ezine ezilandelayo. Njengeqembu lama-one-day kumayelana nokukhomba izindawo esingazilungisa, futhi i-spin siyangena lapho. Ukuthi sikwenza kanjani lokho inselelo yezinyanga ezizayo.”
Umdlalo kulindeleke ukuthi uqale ngo-10h00.
u-Rabada no-Shamsi bahlela ukunqoba okulula kwama-Proteas kwi-ODI yokuqala Ama-Proteas ashintshela kuma-ODI